1839 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးလောင်စာဆဲလ်ဆာဝီလျံရောဘတ် Grove တစ်ဝတရားသူကြီး, တီထွင်သူနှင့်ရူပဗေဒပညာရှင်များကပဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်။ သူရော ဟိုက်ဒရိုဂျင် နှင့် အောက်စီဂျင် တစ်ဦး၏ရှေ့တော်၌ Electrolyte တွေ နှင့်ထုတ်လုပ် လျှပ်စစ်မီး နှင့်ရေ။ နောက်ပိုင်းလောင်စာဆီဆဲလ်အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်ထားတဲ့တီထွင်မှု, အသုံးဝင်သောဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်ခဲ့ပါဘူး။
1889 ခုနှစ်, ဝေါဟာရကို " လောင်စာဆဲလ် " ပထမဦးဆုံးလေကြောင်းနှင့်စက်မှုကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့ကိုသုံးပြီးအလုပ်လုပ်လောင်စာဆဲလ်တည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူကိုက Ludwig Monde နှင့်ချားလ်စ် Langer ဖြင့်စတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။
နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်ကပထမဦးဆုံးဟူသောဝေါဟာရကိုစတင်သုံးစွဲတဲ့သူက William အဖြူရောင် Jaques ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည် "လောင်စာဆဲလ်။ " Jaques ကိုလည်း Electrolyte တွေရေချိုးအတွက်ဖော့စဖောရက်အက်ဆစ်သုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးသုတေသနပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
1932 ခုနှစ်တွင်အင်ဂျင်နီယာ Francis က T က Bacon လောင်စာဆဲလ်သို့မိမိအဖို့အရေးကွီးသုတေသနစတင်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းဆဲလ်ဒီဇိုင်နာများအတွက် Electrolyte တွေရေချိုးအဖြစ်စိမ်ပလက်တီနမ်လျှပ်နှင့်ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပလက်တီနမ်အသုံးပြုခြင်းစျေးကြီးကြီးနှင့်ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်သုံးပြီးတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘေကွန်ဟာလျော့နည်းတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး alkaline များ Electrolyte တွေနှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့နီကယ်လျှပ်သုံးပြီးဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ဆဲလ်နှင့်အတူစျေးကြီးပလက်တီနမ်အဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာအပေါ်တိုးတက်လာသည်။
သူကတစ်ဦးဂဟေဆော်စက်ပါဝါနိုင်မယ့်ငါးကီလိုဝပ်လောင်စာဆဲလ်သရုပ်ပြတဲ့အခါမှာဒါဟာသူ့ဒီဇိုင်းစုံလင်မှ 1959 သည်အထိဘေကွန်ကိုယူ။ Francis က T. Bacon, အခြားလူသိများတဲ့ Francis Bacon ၏တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာသည်, မိမိနာမည်ကြီးလောင်စာဆဲလ်ဟာဒီဇိုင်းအမည်ရှိ "Bacon ဆဲလ်။ "
1959 ၏အောက်တိုဘာလများတွင်ဟယ်ရီကားလ် Ihrig သည်မဟာမိတ်များများအတွက်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး - Chalmers ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ, အစဉ်အဆက်တစ်လောင်စာဆဲလ်စွမ်းအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးမော်တော်ယာဉ်ကြီးတဲ့ 20-မြင်းကောင်ရေအားလယ်ထွန်စက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။
အစောပိုင်း 1960 စဉ်အတွင်း General Electric များအတွက်လောင်စာဆဲလ်-based လျှပ်စစ်ပါဝါစနစ်ကထုတ်လုပ် NASA ရဲ့ Gemini နှင့် Apollo အာကာသတောင့။
General Electric က၎င်း၏ဒီဇိုင်း၏အခြေခံအဖြစ် "Bacon ဆဲလ်" တွင်တွေ့ရှိခဲ့အခြေခံမူကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယနေ့အာကာသ Shuttle ရဲ့လျှပ်စစ်မီးလောင်စာဆဲလ်များကထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်, နှင့်အတူတူပင်လောင်စာဆဲလ်အမှုထမ်းများအတွက်သောက်သုံးရေပေး။
နာဆာနျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုသုံးပြီးအန္တရာယ်များလွန်းမြင့်မားခဲ့အသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ် ဘက်ထရီ သို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အာကာသယာဉ်များအတွက်သုံးစွဲဖို့လည်းအခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ နာဆာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဘို့ယခုအလားအလာတစ်ဦးအဆင့်နည်းပညာဆောင်ခဲ့လောင်စာဆဲလ်နည်းပညာရှာဖွေစူးစမ်း 200 ကျော်သုတေသနကန်ထရိုက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
တစ်ဦးလောင်စာဆဲလ်စွမ်းအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးဘတ်စ်ကား 1993 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ခဲ့ပါတယ်နှင့်အတော်ကြာလောင်စာဆဲလ်ကားများယခုအခါဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတညျဆောကျလျက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ Daimler-Benz နှင့် Toyota 1997 ခုနှစ်တွင်ရှေ့ပြေးပုံစံလောင်စာဆဲလ် powered ကားများစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
လောင်စာဆဲလ်ဟာ Superior စွမ်းအင်ရင်းမြစ်
"လောင်စာဆဲလ်တွေအကြောင်းကိုဤမျှလောက်ကြီးစွာသောင်ဘာလဲ?" ကိုဒီတစ်ခါလည်းအဖြေ မေးခွန်း "ဘာ, ညစ်ညမ်းမှုအကြောင်းကိုဤမျှလောက်ကြီးစွာသောင်ဖြစ်သင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲနေတဲ့ သို့မဟုတ်ရေနံ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ကျောက်မီးသွေးထဲက running?" ကျနော်တို့လာမယ့်ထောင်စုနှစ်သို့ခေါင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးထိပ်မှာပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ဂြိုဟ်-friendly နည်းပညာထားရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
လောင်စာဆဲလ်တွေနှစ်ပေါင်း 150 ကျော်အဘို့အလှည့်ပတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲရရှိနိုင်, ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကြောင်းစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကိုပူဇော်ကြသည်။
ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်သူတို့ပြီးသားနေရာတိုင်းကိုအသုံးပြုမနေကြသနည်း မကြာသေးမီကသည်အထိပြုလုပ်ကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆဲလ်တွေလုပ်လွန်းစျေးကြီးရှိကြ၏။ ဆိုလိုသည်မှာယခုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
အမည်ရယင်းကွန်ဂရက်ဟိုက်ဒရိုဂျင် 1996 ၏အနာဂတ်အက်ဥပဒေနှင့်ကားများအဘို့သုညထုတ်လွှတ်အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်အတော်ကြာပြည်နယ်ဥပဒေများကို: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ဥပဒေပြုအတော်ကြာအပိုင်းပိုင်းဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လက်ရှိပေါက်ကွဲမှုရာထူးတိုးပါပြီ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလောင်စာဆဲလ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုကျယ်ပြန့်အများပြည်သူရန်ပုံငွေနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်နိုင်ငံတည်းကနောက်ဆုံးသုံးဆယ်နှစ်အတွင်းလောင်စာဆဲလ်သုတေသနသို့တစ်ဦးထက်ပိုဘီလီယံနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။
1998 ခုနှစ်တွင်အိုက်စလန်ဂျာမန်ကားထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီ Daimler-Benz နှင့်ကနေဒါလောင်စာဆဲလ်ပြုစုသူ Ballard ပါဝါစနစ်များနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထဲမှာဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးကိုဖန်တီးရန်အစီအစဉ်များကြေညာခဲ့သည်။ 10 နှစ်စီမံကိန်းလောင်စာဆဲလ်-powered ယာဉ်များကူး, အိုက်စလန်ရဲ့ငါးဖမ်းသင်္ဘောများအပါအဝင်အားလုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်။
မတ်လ 1999 ခုနှစ်, အိုက်စလန်, ရှဲလ်ရေနံ, ကုမ္ပဏီ Daimler Chrysler နှင့် Norsk Hydroformed ကုမ္ပဏီနောက်ထပ်အိုက်စလန်ရဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့။
ဖေဖော်ဝါရီလ 1999 ခုနှစ်, ကားများနှင့်ကုန်တင်ကားများအတွက်ဥရောပရဲ့ပထမဦးဆုံးပြည်သူပိုင်စီးပွားဖြစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဘူတာရုံဟမ်းဘတ်, ဂျာမနီစီးပွားရေးအဘို့အဖွင့်လှစ်။ ဧပြီလ 1999 မှာတော့ကုမ္ပဏီ Daimler Chrysler 90 တစ်နာရီမိုင်တစ်ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းနှင့် 280 မိုင်အကြံပေးအဖွဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူအရည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်မော်တော်ယာဉ် NECAR 4. ထုတ်ဖော်ပြသ, ကားစာနယ်ဇင်း wowed ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ Daimler Chrysler လောင်စာဆဲလ်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် $ 1.4 ဘီလီယံကိုပိုမိုသုံးစွဲခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်, အဲဒီအခြိနျအားဖြင့်ယခုနှစ် 2004 ခုနှစ်များကန့်အသတ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်လောင်စာ-cell ကားရှိသည်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
သြဂုတ်လ 1999 ခုနှစ်တွင်စင်္ကာပူရူပဗေဒပညာရှင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်မယ်လို့အယ်လကာလီ doped ကာဗွန်မျှင်တွေကပ်၏အသစ်တစ်ခုကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုနည်းလမ်းကြေညာခဲ့သည်။ တစ်ဦးကထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ, စန်းယန်, မော်တော်ဆိုင်ကယ် powered ပထမဦးဆုံးလောင်စာဆဲလ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဒီနေရာမှာ မှစ. အဘယ်မှာရှိ Go သလား?
ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာအင်ဂျင်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့်အတူပြဿနာများကိုနေဆဲရှိပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေး, သိုလှောင်မှုနှင့်လုံခြုံရေးပြဿနာများဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Greenpeace သဘာရုပ်ပျိုထုတ်လုပ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အတူလည်ပတ်နေတဲ့လောင်စာဆဲလ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရာထူးတိုးပေးခဲ့သည်။ ဥရောပကားထုတ်လုပ်သူယခုအချိန်အထိကီလိုမီတာ 100 နှုန်းဓာတ်ဆီကသာ3လီတာစားသုံး super-အကျိုးရှိစွာကားတစ်စီးများအတွက် Greenpeace သဘာစီမံကိန်းကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။
အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည် H ကို-Power, အဆိုပါဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်ပေးစာနှင့်ဆီဆဲလ် 2000 မှဝင်
အဘယ်သူသည် Grey ကဆံပင်များအတွက်ရောဂါကုထုံးတီထွင်ပါသလား
ဖလော်ရီဒါအတ္တလန္တိတ်တက္ကသိုလ် (FAU) အဆင့်လက်ခံရေး
ငါး Element ကို Generating (Sheng) & ထိန်းချုပ်ရေး (Ke) Cycle
Taoist အလေ့အကျင့်ထဲမှာကျင့်ဝတ် & ငျြ့တရား
Ayn Rand: တစ် Serial Killer ချက်ကိုကျွန်တော်လေးစားမိတယ်အဘယ်သူသည် Sociopath?
10 အရေးကြီး Swing ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်ဂျက်ဇ်ဂီတဂီတပညာရှင်များ
အပြည့်အဝပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: 2007 ခုနှစ်ဟွန်ဒါကြားဖြတ် VFR ကို ABS
တစ်ဦးနဲ့ Mac ပေါ်မှာက MySQL Installing
ထိပ်တန်း 10 ကွန်ဆာဗေးတစ်ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်
Ford ကား Raptor
Stanley Woodard, နာဆာအာကာသအင်ဂျင်နီယာများ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
ယုံကြည်ခြင်းက 13 ဆောင်းပါးများ: Mormonism ယုံအဘယ်အရာ၏ရိုးရှင်းသောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်